SIDA LOOLA TACAALO CUDURRADA IYO CAYAYAANKA NOOCYO TUFAAX AH "MELBA" - GEED GEEDEEDKA
Geedaha Apple - mid ka mid ah geedaha waaweyn ee beeraha. Waxaa jira noocyo badan oo leh Bisaylkiisa kala duwan oo dhadhan. Si kastaba ha ahaatee, waxay yihiin dhammaanba kaydka qiimaha fiitamiinada. Si kastaba ha noqotee, si loo gaaro goosashada wanaagsan, ninkii beerta ka shaqaynayay wuxuu u baahan yahay inuu geedo ka badbaadiyo cudurada iyo cayayaanka.
Melba cudurada ugu weyn iyo daaweyntooda
Melba - noocyo caan ah oo caan ah oo tufaax ah, caan ku ah miraha cajiinka ah oo cajiib ah iyo wax-soosaarkooda sare. Si kastaba ha ahaatee, beeralayda khibrad leh waxay si fiican u ogyihiin dhibaatada ka soo horjeeda saboolka xun ee geedkan ka soo horjeeda cudurada iyo cayayaanka, gaar ahaan qolof.
Sababtan awgeed, si ay u awoodaan inay ku cunaan tufaax casiir leh, waxaa lagama maarmaan ah in ay si dhow ula socdaan xaaladda geedka, si loo ogaado calaamadaha astaamaha ee waqtiga iyo in ay si xirfad leh uga jawaabaan dhibaatada soo baxday.
Sida loo ilaaliyo geedka tufaaxa ee qolofka
Tilmaamaha dibadda ee qoloftaoo tilmaamaya baahida loo qabo in lagu dhawaaqo digniinta, waxaa jira dhibco caan ah oo caleemaha ka samaysan, markii ugu horreeyay ee cagaaran-cagaaran, mar dambe madow iyo dillaac.
Marka laga bilaabo caleenta, cudurku si dhakhso ah ayuu ugu faafaa ugxan iyo midhaha, oo saameeya geedka oo dhan, sidaa daraadeed waa wax aan suurtagal ahayn in laga takhaluso qolofta Melba iyada oo aanad wakhti badan iyo dadaal ku bixin.
Aad ayey u fiicantahay in la fekero ka hortagga. Si dhamaadka this, dayrta, isla markiiba ka dib goosashada, hababka soo socda waa in la sameeyaa: ka saar khudradda la qalajiyey, gooyo laamood dhintay, jir, haddii loo baahdo, nadiif ah iyo cadaan. Goobta agagaarka geedka waxaa lagu daadi karaa HOL (0.5 kg baaldi biyo ah).
Waa muhiim! Dhammaan caleemo, ka soo dhacay tufaax, waa in la ururiyaa oo laga saaraa ama la gubaa.
Guga sidoo kale waa wakhti fiican ee dayactirka, laakiin waa inay ahaadaan ilaa ay gooyaan. Waa mid waxtar leh in lagu buufiyo geed leh xal 1% oo ah isku darka Bordeaux. Haddii la rabo, sida ugu dhaqsaha badan geedka tufaaxa, waxaa dib loo dhigi karaa Bordeaux ama xal "Zineba", "Kaptan" ama "Kuprozan".
Laba toddobaad oo kale, bacriminta ugu dambeysa ayaa la qaadaa, laakiin si looga fogaado gubashada, kaliya dhawr laanood waa in lagu daaweeyaa dareeraha Bordeaux, oo kaliya oo hubinaysa in aysan jirin fal-celin kiimikada, buufin geedka oo dhan.
Jeex badanaa waxay bilaabaan inay muujiyaan dhamaadka bisha May. Ilaa heerkan waxaa wanaagsan in lagu quudiyo geedka tufaaxa "Humate" ama "Fitosporin-M", ka dibna codsiga badan ee "kimistari" aan loo baahnayn mustaqbalka.
Haddii qolofta ay ku dhufato geedka, tirada daaweynta xilli ciyaareedkan waa la kordhin karaa ilaa lix.
Sida loo xanaaneeyo geed ka soo jeexan xayrta
Macmacaanka macaanka Waxay u muuqataa sida dhuuban, dhoobo cad oo caleenta ah, oo si sahlan loo tirtiro marka ugu horeysa, laakiin markaa waxay bilaabmaysaa in ay adkaato oo madoobaato. Naas-nuujinta oo aan lahayn oksijiin iyo qoyaan, caleenta wuxuu bilaabmayaa inuu huruud noqdo, curlka tuubooyinka, qalajiyo iyo dayrta. Ovaries ayaa sidoo kale dhaca.
Si loola dagaallamo macmacaankasida xajinta, way ka adag tahay sidii loo ilaalin lahaa ilaalinta ka hortagga ah. Toddobaad kasta, geedka tufaaxa waxaa lagu daaweeyaa kiniiniga potassium, oxide copper, sulphate birta, isku dhafka Bordeaux ama diyaargarro gaar ah (tusaale, Topaz si fiican ayuu u shaqeeyay), iyo haddii aanay gacanta ku jirin, isticmaal xal soodhada ah.
Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ka taxadarto isticmaalka Bacriminta nitrogenous, sababtoo ah xadgudubkoodu wuxuu kicin karaa cudur.
Waa muhiim! Calaamadaha ugu horreeya ee cudurka, caleemaha saameeyeen ama ugxansidaha waa in isla markiiba laga saaro.
Dagaalida kalluunka miraha (moniliosis)
Miro miraha waxay keentaa mycelium fungal ku jira tufaax la qalajiyey sanadkii hore. Haddii miraha noocaas oo kale ah aan laga saarin geedkii waqtigaa, mycelium wuxuu u wareegaa iyaga si ay u laamoodaan si ay u laamoodaan, halkaas oo ay u quruxbadan tahay guga iyo miraha yar yar oo miraha yar yar ka dib marka la xiro.
Cudurku wuxuu ku bilaabmaa dhibco jilicsan oo tufaaxa tufaaxa, kaas oo si dhaqso ah u kora, ka dibna korniinka cad ayaa dhacaya, hilibka midhaha wuxuu noqdaa mid bunal leh oo aan haboonayn cuntada.
Fruit Rot Treatment waxay ku siinaysaa in lagu buufiyo "Quick", "Horus" iyo "Fundazole": marka hore - sida ugu dhakhsaha badan ee caleemaha la duubay, tan labaad - ka dib geedkii tufaaxu ubaxday, iyo saddexaad - qiyaastii saddex toddobaad ka hor goosashada.
Intaa waxaa dheer, waa inaad u hoggaansantaa sharciyada soo socda ee ka hortagga:
xilliga dayrta waxaa lagama maarmaan ah in la qodo wareegga qashinka;
si joogto ah u ururiyaan tufaaxa dhacay iyo isla markiiba saaro miraha ka soo jeeda Melba;
marka tufaax goynta aysan u oggolaanin waxyeello farsamo.
Xaaladaha Brown, oo la mid ah boogaha, waxay u muuqdaan on jilif ee geedka tufaaxa. Kordhinta cabbirka, waxay noqdaan guduud. Laamuhu waxay noqdaan kuwo jajaban, gooyana waxaad arki kartaa naqaska mugdiga ah ee maskaxeedka.
Cytosporosis waxay horumarisaa asalka asalka ah ee yaraanta bacriminta iyo waraabinta aad u badan.
Daaweynta cudurka wuxuu ka kooban yahay boogaha boogaha si ay u noqoto mid caafimaad leh oo leh daaweyn xiga oo leh sulphate copper (10-20 g halkii baaldi oo biyo ah) iyo ku dhajinta beerta beerta.
Waa lagama maarmaan in la dhoofiyo ama la gubo jilif la nadiifiyey iyo laamo la qalajiyey. Tani waa in la sameeyaa xilliga gu'ga, ilaa heerkulku kor u kaco 15 ° C, marka funguska fungus uu bilaabo inuu si firfircoon u horumariyo.
Ka hor inta gaysashada iyo ka dib ubax, geedka tufaaxa waxaa lagu buufin karaa HOM, iyo kahor ubax, leh Fundazole. Xilliga dayrta, geedka ayaa faa'iido leh in lagu quudiyo Bacriminta Fosfat iyo potash.
Astaamaha iyo daaweynta gubashada bakteeriyada
Calaamadaha calaamadaha gubashada - geedaha tufaaxu waxay bilaabaan inay cawlaan oo ay ka baxaan caleemaha, tufaaxa iyo sidoo kale ku dhacaan.
Cudurku wuxuu ku bilaabmaa sunta carrada, waxaana badanaa lagu wareejiyaa ninkii beerta ka shaqeeyaa, ama halkii qalabkiisa oo uu ku kobciyo bakteeriyo cudurka qabta oo caafimaad qabta ama ka gooyo laamaha caafimaadka bukaanka. Cudurku sidoo kale wuxuu noqon karaa "la keenay" warshad cusub.
Gubashada bakteeriyadu waa wax aan macquul ahayn in la dagaalamo. Way ka fiican tahay in gabi ahaanba ay ka baxdo geed ka badan sidii lumay beerta oo dhan.
Si looga hortago naftaada, waa inaad ka fogaato inaad gawaarida iibsato meelo aan la garaneynin, jeermiska qalabka beerta ka dib isticmaalka kasta, dabcan, burburin cayayaanka, maadaama ay sidoo kale faafinayaan cudurka. Wixii ka hortag, waxaa sidoo kale suuragal ah guga in ay ku buufin dalka dhulka ku leh xal of sulphate copper.
Cayayaanka ugu weyn ee geedaha tufaaxa, siyaabo loola dagaallamo cayayaanka xun
Dhirta miraha waxaa loogu hanjiyaa ma aha oo kaliya cudurada, laakiin sidoo kale noocyada cayayaanka oo dhan. Sidaas, cayayaanka ugu weyn ee geedaha tufaaxa, oo ay ku jiraan Melby, waa balanbaalis, abooro, riwaayado, sawaxis, scytworm iyo caws, kuwaas oo saameyntooda khatarta ah lagu xukumi karo magacyada iyaga laftooda. Waanu fahmi doonaa waxa la samaynayo mid kasta oo ka mid ah cayayaankaas.
Caagadan yar yar ayaa ah mid aan fiicnayn maxaa yeelay waxay ukuntaa caleemaha yar yar ee geedka, ka dib markii ay ku duubaan tuubo, kaas oo magaca cayayaanka. Gawaarida, lakabay, waxay awoodaan inay cunaan caleen si buuxda, oo kaliya jaraya.
Si aad ula dagaallanto buug-yarahaan way kala duwanaan kartaa. Marmarka qaarkood si wax ku ool ah burburka jirka ee cayayaanku (gubashada caleemaha cufan ama soo jiidashada shimbiraha cayayaanka cunta beerta beerta) ama abuurista daboolo khaas ah oo ka hortagaya in ay gaaraan geed.
Waxaa loo isticmaali karaa in lagu dilo cayayaanka hababka dadweynaha: faleebada tubaakada, dekoction ee dooxada, baradhada ama daboolka yaanyada.
Hase yeeshee, ugu kalsoonaantu waxay ka takhalusi duufaanta iyo siinta diyaarinta kiimikada. Habkani ma aha mid aad u ammaan ah, markaa waxaad u baahan tahay inaad ku tilmaanto keliya xaaladaha deg dega ah - haddii geedka tufaaxa ay saameyn ku yeeshaan cayayaanku ku filan.
Waa muhiim! Gormaashka xaashida wuxuu si fudud u qabsan karaa ficilka sunta kala duwan, sidaas darteed kiimikada sunta ah waa in si joogto ah loo badalo.
Maadaama meydadkani ay awoodaan in ay si dhaqso ah u dhaqaajiyaan geed si geedka, waa lagama maarmaan in la hirgeliyo ma aha oo kaliya geedkii tufaaxa ee jirran, laakiin dhammaan dadka kale.
Dufan ee cayayaanka this, marka loo eego leafworm, waxay door bidaan in ay jiifsadaan ukunta ee ku hari ubax. Dabadeedna, xayawaanku wuxuu abuuraa abuur, oo dhirbaaxo, oo wuxuu tagaa miro soo socda, markaa tufaaxu ma kobcayo mana dhici karo.
Ma taqaanaa? Mid ka mid ah miraha nolosheeda ayaa burburin kara 2-3 tufaax, halka cayayaanka ay aad u kacsan yihiin in farcanka hal qof uu burburin karo ilaa kun oo miraha.
Si looga hortago cudurka aboorka Waxaa lagama maarmaan ah in si joogto ah loo soo qaato mooska, ka dib si tartiib ah gariiraya geedka si ay tufaaxa waxyeello uhaanan ku jirin, iyo laba jeer sannadkii - xilliga dayrta iyo guga - si aad u nadiifiso jilifkii hore, kaas oo koontooyinka ay joogi karaan.
In asliga ah waxaa jira cadow dabiiciga ah ee cayayaanka. Tani waxaa loo isticmaali karaa iyadoo lagu beeri karo dhirta ubaxyada badan ee suurtagalka ah ee suurtogalka ah ee goobta soo jiidan kara "caawiye". Waxaa la ogaaday in buunshuhu ma jecel yahay urta yaanyada, sidaas darteed waa mid waxtar leh in ay ku beeri ku dhow. Tuufyada daboolka ah ee duqsiyada ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu xakameeyo balanbaalinta.
Cilladahan, sida magaca ayaa tilmaamaya, burburin doona burooyinkeeda, iyada oo ay ku dhex jirayso daloolka uumiinta ukunta.
Tallaabooyin ka hortag ah si loola dagaallamo cayayaanku waxay la mid yihiin kuwa kor ku xusan - jilif daboolo. Ka sokow wanaag si loo caddeeyo geedaha xalka lime cusub (1.5-2 kg baaldi biyo ah).
Isla markaa, waxaa lagu talinayaa in ay ka tagto hal geed oo aan la daaweyn oo ay ku jirto in la isticmaalo hababka farsamada ee la dagaallanka lamid ah (iyaga oo ku ruxaya qashinka oo ku daadi baaldi gaasta).
Waxaad sidoo kale sameyn kartaa ku buufin burooyinkeeda leh "chlorophos".
Cayayaanka Tani waxay sababa dhacdooyinka ugxansii badanaa ka hor inta aysan gaarin aboorka. Lahaansho, lafilku wuxuu ka baxaa midhaha, ku dhacaa dhulka, digs in ay 5-15 cm, halkaa oo ka dhigaysa qumbaha iyo koolajka.
Si loola dagaallamo cayayaanka Geedka tufaaxa ka hor iyo kadib ubax waxaa lagu buufin karaa Chlorofos ama Karbofos.
Cayayaanka wuxuu ubaahan yahay dheecaan ka mid ah geedka, kaas oo lagu muujiyey koritaan yar oo madow oo madow ah. Tirooyin badan oo shitovki ah ayaa joojin kara koritaanka geedka tufaaxa, dhirtu waxay xoqdaa oo dib u hagaajisaa midabka.
Ma taqaanaa? Gaashaanku waa mid aad u adag, ukumahiisuna waxay awoodaan in ay u dulqaataan miisaanka soddon-heerka, iyo qolof difaaca ah ayaa ka dhigaya cayayaanka aan u adkeyn tallaabada diyaarinta kala duwan.
Sida loo yaqaan 'prophylaxis' mid waa in la nadiifiyo dogobka geedaha caws iyo caleemaha dhalinyarada, gooyaa laamaha qalalan, nadiif ah jilifka, dhulka ku qodo si fiican u galinta bacriminta galay, isla markiiba burburiyey gaashaan laga helay geedo tufaaxa.
Qalabka kiimikada geedo ee dayrta isticmaalka naxaas sulfate, guga - "Nitrafen".
Dhowr maalmood ka dib ubax, dirxiga cayayaanka wuxuu galaa marxaladda firfircoon, sidaa daraadeed geed waa in lagu daaweeyaa sunta cayayaanka, tusaale, "Decis". Nidaamka waxaa lagu celiyaa inta lagu jiro xilli sii kordhaya laba jeer ama saddex jeer.
Cayayaanka Tani waxay ka qulqulaysaa buulooga webka caleemaha dhacday ama geed, halkaasoo ay ukumo u dhigto jiilaalka, ilaa 500 gogo 'walba. Guga, digaagga dirxiga iyo cuno ahaanba dhammaan qaybaha dhallinyarada ee geedka.
Ukuntu waxay ka badan yihiin caleemaha dhacday, oo lagu dhajiyay kabaha sida loola baxo. Waxaa jiri kara meelo iyo geedo. Guga, dirxiga hatched wuxuu burburiyaa caleen iyo ubax, cagaarka dhalinyarada iyo ubaxyada.
Ma taqaanaa? Si ka duwan qaylo-dhaanta, haweeneyda, nasiib wanaag, ma laha awood nololeed xoog leh, muuqaalkuna wuu joojin karaa dhowr sanadood, ka dib markii ay mar kale soo baxdo.
Gacmeedku uma geysto waxyeelada weyn ee geedaha sida aboorka, aboorka iyo cayayaanka kale, sidaas darteed dagaalka lagama maarmaanka ah ma aha mid deg deg ah - oo kaliya daryeesha geedka, burburinta cayayaanka cayayaanka ee la helay, iyo xagaaga, marka laga helo caleemaha lagu arki karo caleemaha, daaweeyo geedka tufaaxa cayayaanka.